Imandarmedia.com: यसरी बनाउँदैछन् देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, को–को हुने भए मन्त्री ?
Main News, News » यसरी बनाउँदैछन् देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, को–को हुने भए मन्त्री ?
यसरी बनाउँदैछन् देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, को–को हुने भए मन्त्री ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुर्व सहमती अनुसार राजीनामा दिएपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दोश्रो स्थानीय तह निर्वाचनअघि सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने भएका छन् ।
सोही दिन राजीनामा स्वीकृत गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले ११ जेठमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई अपिल गरेकी थिइन् । सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समय १७ जेठमा सकिन्छ । १८ गते बहुमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट अपिल भए २१ वा २२ मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि निर्वाचन हुने सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबीन शर्माले जानकारी दिए ।